Cross-boarder Woman hanzi Ndakanakirwa neMboro yaDriver weGonyet – Makuhwa.co.zw
Cross-boarder Woman hanzi Ndakanakirwa neMboro yaDriver weGonyet. Makore tichifamba nemaGonyet kuenda Zambia kunotengesa. Murume wangu supported me all the way but dai aiziva zvinoitwa muGonyet umu airwara nehasha. Regai nditsanangure 1 chete scandal pandakanakirwa nemboro yaDriver nemumwe murume muGonyet umu.
Ndakakwira Gonyet paWestgate kumanheru ndichienda Zambia. Pandakapinda pakabva papindawo vamwe baba vaive varefu mbichana asi vane muviri wairatidza kuti vaive nemamuscles. Takagara kumashure kwaDriver pakaBed kaye kemuGonyet, driver vakarova mota. Taitaura nyaya hedu tose tichienda ini ndokuita chivindi ndokutanga kutaura zvesviro.
Makore ose ndaifamba ndakapfeka skirt kuti zvisanetse pakuzogarira mboro. Driver akabva ati “ichokwadi here kuti mboro hombe inonaka?” ini ndakabva ndaseka sezvo ndaiziva kuti aibvunza ini, ndakamupindura ndikati “ehe mboro hombe inonaka asi pane vane diki vanogona kusvira” Takaseka tose nyaya dzichienda mberi. Panguva iyi ndakaona murume uya tongomuti FUNNY achigadzirisa trouser rake achida kuviga mboro yake yanga yamira. Ndakati nechemumoyo chance given ndokutaimira pakataurwa zvinosekesa ndokuseka ndichisimuka pakugara kwangu skirt yangu yanga yakwira mudenga. Zvidya zvangu zvese zveTAN zvanga zvavapachena kuti Funny aone. Panguva iyoyo akaita chivindi ndokubata one gumbo rangu. Paakaona kuti handina kucomplainer akakwidza ruoko rwake kusvika ave pedyo nenyini yangu.
Ndakavhura makumbo angu mbichana iye ndokupinza ruoko rwake kusvika akutambisa kabeans kangu thru panty yangu. Driver akaita kunge achabuda muroad paakaona nepamirror zvayiitika kumashure kwake. Akangofambisa Gonyet a few KMs ndokumira ndokusimuka achiuya kumashure kuya. Vaviri ava vakatanga neni kubva kumakumbo kusvika vacover muviri wangu wese nemakiss. Yaive first time yangu kudyiwa beche zvekuti ndakaita kunge ndamhanya waya nekunakirwa. Driver ndovakatanga kuburitsa mbor yavo ndikati “svirai driver”.
Funny akazoburitsa yake yaive yakakura kunge dziya dzemuTV zvekuti ndakatya kuti size iyi yemboro inogona kusakwana mubeche rangu. But i was wrong… Driver akatundira mucondom raanga akapfeka ini pacorner yeziso ndakaona Funny achipfeka condom. Condom raisakwana raingovhara quarter chete yemboro. Ndakavhura makumbo angu ndikati “please be slow and gentle” Ndakabata zimboro riye ndokunangisa panyini yangu. Ndakasvotora condom riya ndokukanda pasi and whispered in his eye ndikati “haa iyi ndoda nyoro straight”. Akapinza musoro chete ndikanzwa kuti yeah ndanakirwa. Akaisa futi half ndakanzwa ndichipera mweya wekufema. Panguva iyoyo ndakanzwa sharp pain kunge ndabaiwa nebanga asi yaive mboro yaFunny yanga yazadza beche rangu. Akamira akadaro yese yanyura mandiri. Ndakabva ndamuti “chinyatsosvira manje ndofunga ndaijaira manje” Akaiburitsa ndokudzosera zvakare and he was increasing pace.
Akandisvirwa zvekuti ndanga ndakudaidzira zvinyadzi and ndaingotunda every 2 minutes. I lost count kuti ndakatunda kangani. Apa driver havana kuenda nguva yese iyi vaidya mazamu angu. Ndakasvirwa zvandisati ndamboitwa kumba or better still muhupenyu hwangu hwekuziva mboro. Driver akauuya kumuromo wangu ndokunditi ndidye mboro yake, handina kufunga kaviri, ndakavhura muromo wangu ndokutambira mboro iya ndokutanga kusveta. Gonyet rayishaker kudai Funny achisvira.
40 Minutes later akabva anditundira mukati. Ndakaona murume achigwina gwina achitunda ini this was too much for me ndokutanga kutunda zvakare. Funny akasvotora mboro yake and pasina maseconds driver weGonyet anga akundisvira zvakare this time pasina Condom. Ndakanyatsoti nechomumoyo “i don’t care”. Varume ava vakandisvira kusvika kuma3 AM, ndokuzofamba tikamira paTruck Stop ndokutenga sadza. Gonyet rakarohwa kusvika paboarder dzave kuma5. Funny akaita goodbye yake ndokunanga mukati. I never saw him again. Driver ndakavasiya paClearing pavo ini ndokuenda kunotsvaga Kombi to Lusaka. Handikanganwe kunakirwa kwandakaitwa nemboro!!!
Related Topics:Ndakanakirwa neMboro yaDriver weGonyet
Akandisvira Nayo Nyoro Mugomo